ပထဝီဝင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Poetry » ပထဝီဝင်	7
Posted by ko six on Jan 23, 2016 in Poetry |7comments
၁၂ ရာသီလုံး ခဲနေခဲ့ရ
အမြဲစိမ်းတောထက် ပိုပြီး စိမ်းလို့။
မြေပုံပေါ် တစ်လှည့်စီ စောင့်ရှောက်နေတယ်။
သင့်အရိပ် says: မူးလိုက်တာ
ko six says: ဟုတ်။
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် (B.E) says: ဖတ်လို့တော့ကောင်းတယ် နားတော့မလည်ဘူး
ko six says: Kai
ဂဆက်မှာရေးသမျှ ဘယ်ကိုမှ မပို့ပါ ဆရာ။
naywoon ni says: ၂၀၁၆ တစ်​​နေ့လုံးလုံး
အင်္ဂ​တေလို မာမာ​ကြော​ကြော ။
အခြားက​လေး​တွေထက်​ ကျန်းမာသန်​စွမ်းလို့ ။
ဥပ​ဒေ နဲ့ ညီသည်​လား
အလှူခံအသံချဲ့စက်​​တွေညံဆူ​နေတုန်​ပဲ ။ Ko Seven
ko six says: Ko seven.
Good job for answer back.
အောင် မိုးသူ says: ၁၁ ဂဏန်း